Kulanki golaha wasiirrada ee maanta oo looga hadlay ammaanka dalka – Radio Muqdisho
Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Somaliya, ayaa maanta yeeshay kulankoodii joogtada ahaa, waxaana shir guddoominayay ku-simaha Ra’iisul Wasaaraha ahna R/wasaare ku xigeenka Maxamed Cumar Carte.
Kulankan waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen sugidda amniga dalka, dagaalka Guriceel iyo sidoo kale dardargalinta howlaha shaqo ee Xukuumadda.
Golaha, ayaa warbixin ka dhageystay Wasiirka Amniga Gudaha Cabdirisaaq Maxamed Cumar, isaga oo uga warbixiyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, wuxuuna xusay in ciidanka amnigu ay si adag uga jawaabeen dhacdooyinkii caasimadda ka dhacay, isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka mid ah kooxihii ka danbeeyay dilalkii ka dhacay Muqdisho, gaar ahaan qaar kamid ah kooxihii ka dambeeyay dilkii saraakiishii ka shaqaynayay Garoonka Muqdisho, waxaana ay xubnaha Golaha Wasiiradu wada jir uga tacsiyeyeen dadkii ku naf waayay weerardii ugu dambeeyay.
Ku-simaha Ra’iisul Wasaaraha Maxamed Cumar Carte, ayaa boggaadiyay dadaalka ay sameeyeen ciidamadda ammaanku, waxaana uu sheegay in qorshaha ammaanka wax looga qabanayo uu yahay mid ay ka wada qayb qaadanayaan ciidamada iyo daweynaha Somaliyeed, si looga hor tago khatarta ay la imaan karaan kooxaha nabadiidka ah, wuxuna dhinaca kale mahad celin u jeediyay ganacstada iyo indheer garadka Somaliyeed, ee kala dhex galay dhinacyadii ku dagaalamay Degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud.
“Waxaan bogaadin u dirayaa dadkii Soomaaliyeed ee isku howlay in ay kala dhex galaay dhinacyadii ku dagaalamay degmada Guriceel, waxaan rabaa in aan bulshada Soomaaliyeed u xaqiijiyo Ciidanka qaranku inuu u taagan yahay ilaalinta nafta iyo sharafta shacabka Soomaaliyeed.” Ayuu yiri Maxamed Cumar Carte.